नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको निशानामा किन परे महासचिव पौडेल ? – Himalaya Television
नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको निशानामा किन परे महासचिव पौडेल ?
२०७७ मंसिर १४ गते १५:०७
१४ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको भूमिकाप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
पार्टीमा बैठक नबस्दा समस्या आएको र महासचिव पौडेलले बैठक बस्न हुन्न भन्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विचारलाई साथ दिएको भन्दै गौतमले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।
पार्टीभित्र विवाद समाधानका लागि भूमिका खेल्ने नेताका रुपमा परिचय बनाएका महासचिव पौडेलकै भूमिकामाथि गौतमले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
बैठक बस्दा दुबै अध्यक्षको सहमति हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ बैठक बस्न नदिने गरी विचार राख्न र अवरोध गर्न कुनै पनि अध्यक्षले नपाइने गौतमले प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
वैठकका सम्बन्धमा र प्रक्रियाका सम्बन्धमा आफ्नो विचार राख्न गइरहेको छु ।
पार्टी बाहिर छरिएका हाम्रा विचारहरु आजदेखि पार्टीमा भित्रिएका छन् । चाहेमा अब हामीले समस्या समाधान गर्न सक्छौँ । किनकी, पार्टीको जीवन कमिटीका बैठकहरुमा हुन्छ र बैठकहरुको जीवन छलफलमा हुन्छ । यस्तो गर्न छोडेको दिनदेखि नै पार्टी जीवन समाप्त हुन्छ । बैठक वस्न छलफल गर्न शुरु गर्दा साथ पार्टीको पुनर्जीवन शुरु भइहाल्छ । यो वैठक वस्ने वातावरण बनाउन जो–जसले मिहेनत गर्नुभयो उहाँहरुलाई धन्यवाद छ । बैठकमा आफूलाई लागेको कुरा खुला–खुलस्त, बिनालप्पन–छप्पन, मौखिक–लिखित रुपमा विचार राख्नु हुने दुवै अध्यक्षलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु ।
बैठक बस्दा दुबै अध्यक्षको सहमति हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ बैठक वस्न नदिने गरी विचार राख्न र अवरोध गर्न कुनै पनि अध्यक्षले पाइन्नँ । पार्टी विधानमा आवश्यकताबमोजिम बैठक बस्ने भन्ने व्यवस्था भएका कमिटीहरुका एकजना सदस्यले औचित्य पुष्टि हुने गरी वैठक वस्न माग गरेमा मात्र पनि महासचिवले अध्यक्षसँंग परामर्श गरी बैठक बोलाउनुपर्छ । यस्ता व्यवस्थापनसित सबवन्धित विषयमा पनि विवेक पुर्याउन नसक्नेलाई के भन्नु ? यत्ति व्यवस्था मिलाउन नसक्दा पार्टीमा यति ठूलो समस्या पैदा भयो । बैठक बस्न हुन्न भन्ने विचारलाई महासचिवले साथ दिनुहुन्न ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को मिति २०७७ मंसिर १३ गते सम्पन्न सचिवालय बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्ष क.वामदेव गौतमले निम्नअनुसारको धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ । यी धारणालाई यहाँहरुको अनकूलताअनुसार प्रयोग गर्नुहुने विश्वास लिइएको छ ।
पार्टी विधानमा आवश्यकताबमोजिम बैठक बस्ने भन्ने व्यवस्था भएका कमिटीका एकजना सदस्यले औचित्य पुष्टि हुने गरी बैठक बस्न माग गरेमा मात्र पनि महासचिवले अध्यक्षसँग परामर्श गरी बैठक बोलाउनुपर्ने गौतमको मत छ ।
महासचिव पौडेलप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै गौतमका तर्फबाट प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–यस्ता व्यवस्थापनसित सम्बन्धित विषयमा पनि विवेक पुर्‍याउन नसक्नेलाई के भन्नु ? यत्ति व्यवस्था मिलाउन नसक्दा पार्टीमा यति ठूलो समस्या पैदा भयो। ’
बैठक बस्नु हुन्न भन्ने विचारलाई महासचिवले साथ दिन नहुनेमा पनि गौतमले जोड दिनुभएको छ । हिजोको सचिवालय बैठकमा आफूलाई लागेको कुरा खुला–खुलस्त, बिनालप्पन–छप्पन, मौखिक–लिखित रुपमा विचार राखेको भन्दै गौतमले दुवै अध्यक्षलाई धन्यवाद दिनुभएको छ ।
पार्टी बाहिर छरिएका विचारहरु हिजोको सचिवालय बैठकपछि पार्टीमा भित्रिएको र चाहेमा समस्या समाधान गर्न सकिने पनि गौतमको धारणा छ ।
पार्टीको जीवन कमिटी बैठक र बैठकहरुको जीवन छलफलमा हुने भन्दै गौतमले बैठक बस्न शुरु गर्दासाथ पार्टीमा पूनर्जीवन शुरु हुने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । महासचिवको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका गौतमले हिजोको बैठक बसाल्न वातावरण बनाउने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ ।
उपाध्यक्ष गौतम नेकपा पौडेल महासचिव